एक युरोप मार्ग योजनाकार तपाईं नेभिगेट मदत गर्छ | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > एक युरोप मार्ग योजनाकार तपाईं नेभिगेट मदत गर्छ
पढ्ने समय:3मिनेट(Last Updated On: 21/02/2021)
एक युरोप मार्ग योजनाकार आयोजना मा आवश्यक छ आफ्नो युरोप भर रेल यात्रा. सबै भन्दा पहिले, त्यहाँ माथि छन् 10,000 एक युरोप मा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ गन्तव्यहरू. कारण गन्तव्यहरू संख्या गर्न, यसलाई आफ्नो यात्रा कसरी नक्शा गर्न अनुसन्धान गर्न महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं शायद युरोप मार्फत यात्रा गर्न आफु आफ्नो अद्वितीय मार्ग चाहनुहुन्छ. र क्रममा गर्न समय को अगाडी योजना, तपाईं अग्रिम टिकट आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ. सबैभन्दा उल्लेखनीय तपाईं सक्षम हुनुपर्छ छ पुस्तक रेल यात्राको समावेश कि ग्राहक सेवा मा आफ्नो भाषा र अनुमति लागि लचीलापन रुचि बचत तालिम दिन्छ.
युरोप मार्ग योजनाकार महत्वपूर्ण योजना कारक
सबै योजना तपाईं आवश्यक यात्रा कागजात छ पक्का सुरु. त्यस्तै, तपाईंको यात्रा योजना अघि, तपाईं विचार गर्न सक्नुहुन्छ उडान को पहिलो गन्तव्य भने तपाईं बाहिर बस्न युरोप र रेल यात्रा भने तपाईं बाँच्न भित्र युरोप किनभने छ कि सबै भन्दा राम्रो बाटो मा यात्रा गर्न युरोप. केही कारक कि जस्तो महत्त्वपूर्ण वर्तमान यात्री छन्; ऐतिहासिक साइटहरु, प्रकृति, नाइटलाइफ, समुद्र तट, खाना, र गतिविधिहरु.
म्यूनिख बर्लिन गाडिहरु गर्न
देश युरोप मार्ग योजनाकार
पहिले, आरक्षण आवश्यक छ रात रेल र अन्तर्राष्ट्रिय रेलका र तपाईं के गर्न सक्छन् यो बचत मा एक रेल. आरक्षण सम्भव छ लागि पनि सहरी उच्च गतिको रेल (लगायत EuroCity र इंटरसिटी). Main intercity routes are Vienna & लिन्ज, सल्जबर्ग, ग्राज & को Carinthia जिल्ला. अस्ट्रिया युरोप मार्ग योजनाकार धेरै राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रेल जडानहरू प्रदान गर्दछ. यसबाहेक, पेय पदार्थ र नाश्ता सबैभन्दा रेल उपलब्ध र भोजन विकल्प उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय रेल. तपाईं अष्ट्रीया रेल मा बाइक ल्याउन सक्छ. तपाईं पनि टिकट लागि Austria गर्न अनुमति दिन्छ कि रेल यात्रा गर्न लिक्टेनस्टैन.
सबैभन्दा रेलका मा बेल्जियम आवश्यकता आरक्षण, यति धेरै छैन नयाँ लागि हाम्रो युरोप मार्ग योजनाकार यहाँ. यो धेरै सिफारिश विशेष गरी कि लागि विमानस्थल रेल, अन्तर्राष्ट्रिय रेल, र उच्च-गति रेलका तपाईं हुनेछ आरक्षण पर्याप्त समय मा अग्रिम. यसबाहेक, बेल्जियम मा रेल 1st र 2nd वर्ग बस्ने छ. यस रेल को केही मिनी बार र तातो र चिसो नाश्ता प्रस्ताव. बेल्जियम भित्र यात्रा पटक बीच यात्राको छिटो हो, लिइरहेको प्रमुख शहर 20 एक घण्टा मिनेट.
त्यस्तै बेल्जियम युरोप मार्ग योजनाकार, you do not need to makeareservation for most trains in Bosnia. It is not possible to make reservations for घरेलू रेल बोस्निया मा. यो Brzi Voz छिटो रेल समावेश र
यात्री स्थानिय रेल. अन्य युरोपेली देशहरूमा यसको विपरीत, बाइक बोस्निया मा रेल मा अनुमति छैन. यसबाहेक, बोस्निया देखि अन्तर्राष्ट्रिय जडानहरू साराजेभो स्टेशन मार्फत जाने.
बुल्गारिया लागि युरोप मार्ग योजनाकार
You don’t need much of Europe Route Planner in terms of reservations for Barz Vlak local ‘rapid’ रेल र पनि Patnicheski स्थानीय रेल. तथापि, आरक्षण Expresen स्तर छिटो रेल र अन्तर्राष्ट्रिय रेल लागि आवश्यक. बुल्गेरियामा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय रेल को बुल्गारिया एक्सप्रेस समावेश, को काला सागर ट्रेन, को ज्वरोेस्ट इस्तानबुल एक्सप्रेस र सोफिया देखि छोडेर त्यसै गरी केही अन्य रेल. बुल्गारिया गरेको मुख्य मार्गहरू लिन 6-8 घण्टा (एकै रातमा रेल सम्भव छ) सोफिया छ, को पाठ्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय जडानहरू लागि मुख्य स्टेशन. बाइक रेल तपाईं तिनीहरूलाई लागि अतिरिक्त तिर्न आवश्यक हुनेछ तर मा अनुमति.
बचत एक ट्रेन संग युरोप मार्ग योजनाकार
किनभने युरोप मार्फत यात्रा गर्न त्यहाँ एक लाख कारण, तपाईं हामी फेला सस्ता टिकट. युरोप सबैभन्दा छ सुन्दर रेल स्टेशन. पनि सबैभन्दा सुन्दर दृश्यहरु भइरहेको हुँदासम्म, लगायत पुल र समुद्र तट. तपाईं देश व्यवस्थापन पछि त तपाईं युरोप मार्ग योजनाकार मा यात्रा, लिन3मिनेट अब युरोप मा सस्तो रेल टिकट बुक गर्न एक ट्रेन सुरक्षित. सबै लोकप्रिय भुक्तानी विधिहरू प्रयोग गरेर भुक्तानी.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-route-planner-trains%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल
#bosnia #bulgaria longtrainjourneys रेल यात्रा travelaustria ट्राभेलबिजियम
I love travel but you didn't expect me not to say that, I amafree spirit who travel in Europe and work in the train industry, hope you like what I write - तपाईं यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सम्पर्क गर्नुस्
आरक्षण ट्रेन टिकट प्रमुख लाभ अनलाइन